Dhacdooyinkii siyaasadda ugu waaweynaa 2015 ee Sweden - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Dhacdooyinkii siyaasadda ugu waaweynaa 2015 ee Sweden
La daabacay onsdag 30 december 2015 kl 16.04
Maxaa ka dhaacay Sweden 2015
Åsa Romson iyo Stefan Löfven. Sawirle: Janerik Henriksson TT Bild
Intii lagu guda-jirey sannadka 2015 ayey dhammaan xisbiyada garabka midig ee Alliansen-ku u janjeersadeeen fikir ah in Sweden ay xubin ka noqoto ururka gaashaan-buurta Naaato
halka dhanka kale ay dawladda dalka maamushaa isku dhaceen maamulka dalka Sacuudiga, middaasina oo ka dambeeysay ereyadii wasiirka arrimmaha dibadda Margot Wallström ay dalka Sacuudiga ciqaabtiisa karbaashka ku tilmaaantay dhaqan ka soo jeeda xilliyadii dhexe.
Dawladda iyo madaxa dawladduna Stefan Löfven waxey halkoodii ka sii wadeen siyaasaddoodii dibadda ee sinnaanta, waxa lagu magacaabo - feministiska utrikespolitik:
- Waxaan aad ugu farax-sanahay inaan dalkan hoggaamiyo, sida uu sheegay madaxa dawladdu. Waxaan sidoo kale aad ugu farax-sanahay inaan hoggaamiyo dawladdii caalamka ugu horreeysay ee ku dhisan mabaadiida feminism-ada.
Waxey ka mid ahaayeen ereyo uu Stefan Löfven bishii septeembar ka jeediyay xaflad heeseed dhaqaale lagu ururinayey ee ka dhacday Central park ee magaalada New York, isagoona ey hareeraha ka joogeen fannaaniin caan ah sida Beyoncé iyo Sting, iyo sidoo kale madax-wayne ku xigeenka dalka Mareeykanka Joe Biden. Xafladdaa ayaa looga gol lahaa sidii loo ururin lahaa dhaqaale lagula dagaalo fakhriga iyo nadaafad-darrada, hase yeeshee uu Löfven qudbaddiisii sidoo kale kaga faa’iideeystay inuu kaga hadlo siyaasadda dawladdiisa ee feminism-ada ku dhisan.
Qudbaddii uu baarlamanka ku soo ban-dhigay Stefan Löfven sannadkii 2014 ee siyaasadda dawladdiisa ayuu markii ugu horreeysay ka caddeeyay in siyaasadda dibadda ee dawladdiisu ku dhisnaan doonto mabaadiida feminsm-ada, middaasina oo gun-dhig u noqotay kolkii ay wasiiradda arrimmaha dibadda Margot Wallström ay bishii jannaayo 2015 ay go’aansatay inay si aad ah u dhaleecayso nidaamka ciqaabta karbaashka ee dalka Sacuudiga ee Raif Badawi oo lagu xukumay 10 sannadood oo xarig ah iyo 1 000 karbaash maadaama sida lagu eedeeyey uu ku jeesjeesay diinta islaamka, mar uu qoraal ku qoray buuggiisa xusuus-qorka ee internet-ka:
- Halkan waa in laga dhiidhiyo tallaabo la oran karo inay ka soo jeeddo caadooyin qarniyadii dhexe iyo weliba sidii loo difaaci lahaa xoriyadda hadalka iyo fikirka, sidaa daraadeed ayay in laga hadlaa ay muhiimad u leedahay, isla-markaana aan laga laaban karin iyo annaga oo uga bannaan-baxeyna si bareer ah, isla-markaana muujineyna sida aan uga welwel-sannahey.
Wallström ayaa bil dabadeed ku magacawday dawladda Sacuudiga,dawlad keli-taliye ah mar ay ka hadlaysay baarlamanka, iyo in xilligii gu’ga la soo gabagabeeyey wada-shaqeeyn dhanka milateriga ee u dhexeeyay labada waddan ee Sweden iyo Sacuudiga, xitaa haddii ey ka dhiidhiyeen shirkada waaweyn ee dalku.
Dawladda Sacuudiga ayaa tallaabadaa jawaab kaga bixisay iyadoona u yeertay safiirkeedii dalkan u joogey muddo dhowr toddobaad gaarsii-san iyo in muddo gaaban la joojiyay viisooyinkii baayacmushtarka ee muwaadiniinta iswiidhishka la siin jirey. Halka dhanka kale qudbad ay ka jeedin lahayd kulankii waddammada carabta laga joojiyey wasiirka arrimmaha dibadda Margot Wallström, halkaasina oo ay ka haysatay casumaad gaar ah.
Dad badan ayaa aamin-sanaa in xiriirkii labada dal uu muddo dheer aad u xumaaday, hase yeeshee muddo gaaban dabadeed ayay xaaladdii caadi ku soo laabatay. Maria Ranka, ahna agaasimaha guud ee daarta baayac-mushtarka Sweden ayaa sheegtay bishii agoosto:
- Xitaa hadduu xiriirkii labada dal uu dhaawac gaaray, waxaa hadda la oran karaa inuu halkiisii ku soo laabtay.
Margot Wallström ayaa mar kale isla sannadka gudihiis ay isku dhaceen hoggaanka dalka Israa’iil, middaasina oo ka dambeeysay ereyadeedii. Halka uu dhanka kale war-geeyska mareeykanka ee lagu magacaabo Foreign Policy ay ka gashay kaalinta labaad waxa ay ugu magac-dareen ”fekereyaasha caalamiga” ee dhammaan madaxda caalamka sannadkii 2015, hase-yeeshee ey dhaleeceeyn kala hor-yimaadeen xisbiyada garabka midig maadaama beyna yiraahdeen ay u hadasho si ka bax-san anshaxa siyaasadda oo aan laga fiir-san. Hase yeeshee maahan wax lala yaabo, sida ay sheegtay caalimadda Ann-Marie Ekengren:
- Waa in lagu xisaabtamo kolka la doonayo in la gudbiyo farriin fikir-qiimeed siyaasadda arrimmaha dibadda ku dhisan. Ulama jeedo in Margot Wallström ay tahay Olof Palme cusub, hase yeeshee waxaan aamin-sanahay xaqiiqdii iney jiraan waxyaabo ey ka siman yihiin, iyadoona ay dhaceen arrimmo la mid ah dhanka siyaasadda arrimmaha dibadda kolkii uu Olof Palme hoggaanka dalka hayay. Iyadoona laba loo kala jabey. Dhinac ku taageer-sanaa iyo dhinac kaga soo hor-jeeday siyaasaddiisa kuna tilmaamayay tallaabooyin siyaasadeed oo aan laga fiir-san.
Qaxootiga faraha badan ee dalka soo galey bilihii ugu dambeeyey ayaa sabab u noqotay in lagu maal-geliyo dhaqaale laga soo jarey miisaaniyadda taageerada caalamiga. Qiyaastii 20% ee miisaaniyaddaa ayaa loo isticmaalay sannadka 2015 miisaaniyadda taageerada caalamiga sidii loogu qaabili lahaa soo-galootiga. Dhanka kale heshiis ay wada gaareen xisbiyada S iyo MP ayey go’aan ku gaareen in ugu badnaan 30% laga qaadi karo taageerada caalamiga si loogu miisaaniyad geliyo howlaha qaabilaadda qaxootiga.
Dhanka siyaasadda difaaca ee sannadka 2015 ayey afarta xisbi ee garabka midig ee Alliansen-ka lagu magacaabo ey u janjeersadeen in Sweden ay xubin ka noqoto gaashaan-buurta Naato. Fikirkaa ayey horay u qabeen xisbiyada Moderaterna iyo Liberalerna inuu dalkani xubin ka noqdo Naato , halka kulan-sannadeedkii xisbiga Center-ku ee ka qabsoomay magaalada Falun gabagabadii bishii septeembar tallaabo taariikhi ah uu xisbigu u qaaday oo ey u codeeyeen in dalkani uu xubin ka noqdo gaashaan-buurta Naato. Staffan Danielsson, af-hayeenka siyaasadda difaaca wuxuu ka mid ahaa dadyoowgii u ololeeynayey siyaasadda:
- Maamulka Ruushku wuxuu fahmaa oo keliya xaqiiqda iyo awoodda. Ammaanka Sweden ayaa ka hagaagsanaanaya haddii uu dalkani ka mid noqdo Naato. Go’aan geesi-nimo leh ayuu ahaa oo uu hoggaanka xisbigu qaatay.
Dhowr toddobaad dabadood, bartamihii bishii oktoobar ee xigtay ayuu xisbiga Kristdemokraterna kulankiisii sidoo kale ugu codeeyay in Sweden ka dalbato ururka gaashaan-buurta Naato xubin-nimo.
Hase-yeeshee ey saddexda xisbi ee garabka bidix ey ka soo hor-jeedaan xubin-nimada ururka gaashaan-buurta Naato iyo sidoo kale xisbiga Sverigedemokraterna.
Haddii laga eego dhanka siyaasadda arrimmaha dibadda guud ahaan ma waxaa jira is-bedel ku yimid sumcadda dalkan loo hayo kolka la isu barbar-dhigo maamulka iminka jira iyo midkii isaga ka horreeyay?
Haa, ayay leedahay caalimad Ann-Marie Ekengren oo jaamicadda Göteborg ka dhigta culuunta siyaasadda:
- Waxaa is bedelay nuxurkii ereyada. Dawladdii ey hor-kacayeen Reinfeldt iyo Carl Bildt, waxaa siyaasadda arrimmaha dibaddu ey ku jiohaysnayd dhammaan Yurub. Sweden waxay lahayd codad muuqda ee Yurub. Maanta la mid ma ahan. Iminka waxaa la iska soo hor-marineyaa siyaasadda ku dhisan go’aanka fikirka femism-ada- waa siyaasad u gooni ah Sweden. Intaa marka laga yimaado waxaa muuqata wuxuu hoggaanka dalku sannadkii ugu dambeeyay uu carrabka ku adkeeynayay roolka ururka caalamiga ee Qarammada Midoobey, sida ay sheegtay Ann-Marie Ekengren, ahna caalimad culuunta siyaasadda ka dhigta jaamicadda Göteborg.